Bhuku Rechipiri reMadzimambo 21:1-26
Manase, mambo weJudha; kudeura ropa kwaakaita (1-18)
Jerusarema richaparadzwa (12-15)
Amone, mambo weJudha (19-26)
21 Manase+ aiva nemakore 12 paakava mambo, uye akatonga kwemakore 55 muJerusarema.+ Amai vake vainzi Hefizibha. 2 Akaita zvakaipa pamberi paJehovha, achitevedzera zvinhu zvinosemesa zvaiitwa nemarudzi+ akanga adzingwa naJehovha pamberi pevaIsraeri.+ 3 Akavakazve nzvimbo dzakakwirira dzakanga dzaparadzwa nababa vake Hezekiya,+ uye akavakira Bhaari atari, akagadzira bango rinoyera,*+ sezvakanga zvaitwa naAhabhi mambo weIsraeri.+ Uye akapfugamira uto rese rekudenga achirishumira.+ 4 Anewo atari dzaakavaka muimba yaJehovha,+ makanga manzi naJehovha: “Ndichaisa zita rangu muJerusarema.”+ 5 Akavakawo atari dzeuto rese rekudenga+ muzvivanze zviviri zveimba yaJehovha.+ 6 Akaitawo kuti mwanakomana wake apfuure nemumoto; aiita zvemashiripiti, aitenda mashura,+ uye akagadza masvikiro nevafemberi.+ Akaita zvakaipa zvizhinji chaizvo pamberi paJehovha, achimugumbura. 7 Akatora mufananidzo wakavezwa webango rinoyera*+ waakagadzira akauisa muimba yakanga yanzi naJehovha kuna Dhavhidhi uye kumwanakomana wake Soromoni: “Ndichaisa zita rangu nekusingaperi muimba iyi nemuJerusarema, iro guta randakasarudza pamadzinza ese aIsraeri.+ 8 Handichazoitizve kuti tsoka dzevaIsraeri dzidzungaire dzichibva panyika yandakapa madzitateguru avo,+ kana vakangochenjerera kuita zvese zvandakavarayira,+ Mutemo wese wavakarayirwa nemuranda wangu Mozisi kuti vatevedzere.” 9 Asi havana kuteerera, uye Manase akaramba achivatsausa, achiita kuti vaite zvakaipa kupfuura marudzi akanga aparadzwa naJehovha pamberi pevaIsraeri.+ 10 Jehovha akaramba achitaura achishandisa varanda vake vaprofita,+ achiti: 11 “Manase mambo weJudha aita zvinhu zvese izvi zvinosemesa; aita zvakaipa kupfuura vaAmori+ vese vakamutangira,+ uye aita kuti vaJudha vatadze nezvidhori zvake zvinosemesa.* 12 Saka zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: ‘Ndiri kuunza dambudziko paJerusarema+ neJudha, richaita kuti nzeve dzemunhu wese anorinzwa dziunge.+ 13 Ndichatambanudzira Jerusarema tambo yekuyeresa+ yakashandisirwa Samariya+ uye ndichashandisa tambo yekururamisa* yakashandisirwa imba yaAhabhi,+ uye ndichapukuta Jerusarema rosara rachena sezvinoita munhu anopukuta ndiro, anoipukuta obva aikwidibira.+ 14 Ndichasiya vaya vakasara panhaka yangu+ ndovaisa mumaoko evavengi vavo, uye vachatapwa vopambwa nevavengi vavo vese,+ 15 nekuti vakaita zvakaipa pamberi pangu uye vakaramba vachindigumbura kubvira pazuva rakabuda madzitateguru avo muIjipiti kusvikira nhasi.’”+ 16 Manase akadeurawo ropa risina mhosva rakawanda chaizvo kusvikira razara muJerusarema kubva kwarinotangira kusvika kwarinoperera,+ tisingabatanidzi chivi chake chaakakonzera kuti vaJudha vaite, pavakaita zvakaipa pamberi paJehovha. 17 Kana iri nhoroondo yese yaManase nezvese zvaakaita uye zvivi zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo yenguva yemadzimambo eJudha? 18 Manase akabva aradzikwa pamwe chete nemadzitateguru ake, akavigwa mumunda weimba yake, mumunda waAza;+ uye mwanakomana wake Amone akava mambo panzvimbo yake. 19 Amone+ aiva nemakore 22 paakava mambo, uye akatonga kwemakore maviri muJerusarema.+ Amai vake vainzi Meshuremeti mwanasikana waHaruzi wekuJotbha. 20 Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha, sezvakanga zvaitwa nababa vake Manase.+ 21 Akaramba achifamba munzira dzese dzakafambwa nababa vake, uye akaramba achishumira zvidhori zvaisemesa zvakanga zvashumirwa nababa vake, achizvipfugamira.+ 22 Saka akasiya Jehovha Mwari wemadzitateguru ake, uye haana kufamba munzira yaJehovha.+ 23 Varanda vaAmone vakazomupandukira, vakaurayira mambo mumba make. 24 Asi vanhu vemunyika yacho vakauraya vese vakapandukira Mambo Amone vachibva vagadza mwanakomana wake Josiya kuti ave mambo panzvimbo yake.+ 25 Kana iri nhoroondo yese yaAmone, zvinhu zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo yenguva yemadzimambo eJudha? 26 Saka vakamuviga muguva rake mumunda waAza,+ uye mwanakomana wake Josiya+ akava mambo panzvimbo yake.